Gtalk virus ထပ်သောင်းကျန်းနေလို ့နည်းသစ်လေးပေး&#4222 — MYSTERY ZILLION
Gtalk virus ထပ်သောင်းကျန်းနေလို ့နည်းသစ်လေးပေး&#4222
တော်တော်ဆိုးနေတာနော် ဘယ်လို နှိပ်နှင်းရမလဲပြောပြကြပါအုံး။ ဗိုင်းရပ်၀င်လာရင်ကောင်းကောင်း စကားပြောလို ့မရတော့ဘူး။ Gtalk ကို remove လုပ်ပြီး
setup အသစ်ပြန် လုပ်ပြီးသုံးရင်လည်း ပြန်ဇြစ်တာပဲ..........
ပြောကြပါအုံး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ...................... Ghost ရိုက်လည်းမရဘူးနော်
private cam virus လားဟင်။.... အဲဒါဆိုရင် ဒီထဲမှာရှာကြည့်ပါ၊ သတ်နည်းလေးကို ရှင်ပြထားပါတယ်။
may wrote: »
ဒီမှာပြောထားတဲ့ virus ထင်တယ်။
သူပြောတာ..loikaw hacking day နဲ့တူတယ်ဗျ...
ပေါက်ကရနာမည်တွေနဲ့..ပြီးတော့..virus information ဆိုပြီး...notepad လေး..desktop
loikaw ကပါ.. ကွန်ပျူတာ..တက်နေတာ. ဘာညာနဲ့.. ကြုံဖူး..ကြလား..မသိဘူး..ဗျ...
အောက်ပါ နေရာများမှာ အရင်သွားရောက် ဖျက်ပါ ..
C:\_Document and settings\_(User Name)\_Application Data\_control.exe
ဒီဗိုင်းရပ်က Registry ,Task Manager စတာတွေကို ပိတ်ထားတက်တယ် အောက်က Restore လေးကိုဒေါင်း ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ ....
အောက်ကလင့်မှ Kill loikaw bat ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းပြီး Run လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Start -->Run -->Type " msconfig" -->Startup tab မှ loikaw.exe ကိုရှာပြီး uncheck ပေးလိုက်ပါ ။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဗိုင်းရပ်က အဆင်ပြေလောက်ပါ ပြီ Reboot လုပ်ပြီး ၀င်းဒိုးပြန်တက်တဲ့အခါ သေချာစိတ်ချရအောင် Registry ကို clean လုပ်လိုက်ပါ Tuneup , C cleaner စတဲ့ utilities တွေနဲ့ အလွယ်တစ်ကူ clean လို့ရပါတယ် ..
For Loikaw virus
loikaw က.. တစ်ချက်လောက်..လောက်ပါဦး..
password တောင်းတာက..တစ်ခြား..folder ပါ..
ဖြစ်နေတာ က အောက်က link နဲ့တက်နေတာ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ မသိဘူးနော်
Hey what are you doing Please test my new webcam using private connection "http://h1.ripway.com/db4/privateCam_v0.1.exe"
အမ်...ဒါဆို webcam ဗိုင်းရပ်စ်ပေါ့.. ကက်စပါကို အက်ပ်ဒိပ်မလုပ်ဘူးထင်တယ်...သေချာအက်ပ်ဒိပ်လုပ်ပြီးစစ်လိုက်ပါ...မရရင်တော့ တခြားစက်မှာ တပ်ပြီးစစ်...ဒါမှမရရင်တော့ ဆိုင်ကိုသာပြေးပေတော့ဗျို့...
ဒီလင့်မှာ သွားယူလိုက်ပါ ။ ပြီးရင် Run လိုက်ပေါ့။
ဘာမှ ကြောက်စရာမလို ဟောဒီမှာ ဒေါင်းစေ http://fs02u.sendspace.com/processupload.html
An error occurred while processing the uploaded file. (10000)
လို ့တွေ ့တယ် ဘယ်လင့်ကို ဆက်သွားရမှာလဲပြောပြပါအုံး:77:
plementboy wrote: »
Kill loikaw bat ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းပြီး Run လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Start -->Run -->Type " msconfig" -->Startup tab မှ loikaw.exe ကိုရှာပြီး uncheck ပေးလိုက်ပါ ။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဗိုင်းရပ်က အဆင်ပြေလောက်ပါ ပြီ Reboot လုပ်ပြီး ၀င်းဒိုးပြန်တက်တဲ့အခါ သေချာစိတ်ချရအောင် Registry ကို clean လုပ်လိုက်ပါ Tuneup , C cleaner စတဲ့ utilities တွေနဲ့ အလွယ်တစ်ကူ clean လို့ရပါတယ် ..
ကျွန်တော်ရဲ့ MP4(JXD 951)လေးထဲမှာလည်း Loikaw ဗိုင်းရပ်စ်က ကဲနေလို့ ဘယ်လိုသတ်ရင်ရမလဲဆိုတာလေးကို